Shiinaha dhalada Crystal diamond muraayad warshad shumac hufan iyo soosaarayaasha | Muraayadda Honghui
★ Cabir caqli badan, oo ku habboon aagag kala duwan, qurxin iyo wax ku ool labadaba.
★ Waxay ka samaysan tahay maaddo tayo sare leh, waxsoosaarkuna waa adag yahay oo siman yahay.
★ Dusha sare ee joomatari-gooyuhu wuxuu ka dhigayaa maadada muraayadda mid hufan, sida dusha sare ee dheeman googo'ay, oo nolosha ku dhex duraya nal iyo hoos u sumeyn kara.
★ Dusha sare ee saddexda geesoodka laga jaro wuxuu hodan ku yahay taabashada iyo muuqaalka qurux badan.
[Qurxinta guriga iyo hadiyado kaamil ah]: Kuwa shumaca haysta waxay ku habboon yihiin inay sharaf iyo jacayl ku daraan miiska cuntada. Qolka jiifka, miiska jikada iyo qolka qolka qurxinta qurxinta, qurxinta ugu fiican ee Kirismaska, Thanksgiving iyo qurxinta miiska xafladaha.
[Hadiyad qurux badan oo hadiyad ah oo qalin jabinta ah] dhalashooyinka, sanad guurada, mahadsanid, Hadiyadaha Maalinta Jacaylka, Hadiyada maalinta Hooyada, Hadiyada Aabaha, Jacaylka & Jacaylka, Cyber ​​Isniinta & Jimcaha Madoow iyo munaasabadaha gaarka ah Dhig shaaha nalka (lama siinin) mid kasta oo haysta oo waxay soo saari doontaa iftiin dhalaalaya oo jilicsan waxayna abuureysaa jawi deggan oo kaa yareeya walwalkaaga isla markaana hurdada hurdada ka hagaajiya
[SOO SAARKA]: alaabooyinka waxaa laga sameeyaa alaab ceeriin oo tayo leh oo qashin yar ku dhaca tallaabo kasta oo wax soo saar ah. Iyada oo ujeedadu tahay in la gaaro raad kaarboon dhexdhexaad ah, fadlan dib-u-warshadeyn oo ka caawi inaad uga tagto Hooyada Dunida si wanaagsan jiilalka soo socda.
[Nabdoon] Fiiro gaar ah: Kahor intaadan ka buuxin muraayadda muraayadda shumacyo cusub, fadlan si fiican u nadiifi si aysan ugu jirin wax dhoob ah iyo / ama laambad shumacyadii hore, taas oo keeneysa khatar nabadgelyo-marwalba ka ilaali xayawaannada carruurta iyo Ka fogow ololka qalabka.
Design Naqshadeynta qaab-dhismeedka Minimalist waxay nolosha ka dhigeysaa mid aad u qurux badan, Fudud oo tayo fiican leh, Laga soo farsameeyay bir leh jaritaanno adag, Abuur muuqaal soo jiidasho leh oo iftiin iyo hoos ah.
Naqshad casri ah oo casri ah oo qurxin kasta leh, oo kufiican qolka fadhiga, goobta cuntada, aqalka, musqusha, iyo qurxinta jiifka.
Kudar Shumaca Iftiinka - Qaabka quruxda badan ee shaaha shumaca iftiinka shumaca, wuxuu hayaa shumac shamac fudud ama shumacyo shidan oo aan olol lahayn. Ku habboon qolka hurdada iftiinka nalka ama qolka fadhiga, waxay sidoo kale ka dhigeysaa mid aad u fiican agabka dhacdooyinka.
Hore: Shumaca muraayadda dhalada ah ee biyaha
Xiga: Muraayad hufan oo shidan shumaca pentagram
Dhalooyinka waaweyn ee Shumaca
Muraayad hufan oo shidan shumaca pentagram
Koob shumac ah oo muraayadaha daahfuran oo casaan ah
Casaan shumac galaas wareegsan oo daahfuran
Shumaca caleen galaas cas
Flat - shumac hufan oo afka laga ...
480g koob shumac cad